Man City Oo Nus Darsin Goolal Ah Ugu Awood Sheegatay Chelsea %
Man City Oo Nus Darsin Goolal Ah Ugu Awood Sheegatay Chelsea
Kooxda Man City ayaa qeybtii hore ee ciyaarta u dirtay kooxda Chelsea afar gool oo nadiif ah ka dib kulan qaladaad dhanka daafaca ah uu hareeyay kooxda macalin Sarri .
Naadiga Man City ayaan waqti badan sugin waxa ayna Chelsea biloowgii kaga naxsadeen gool uu ka shaqeeyay De Bruyne waxaase gool u badalay Rahem ka dib baas uu ka helay Bernardo Silva waxa uuna goolkaas yimid daqiiqaddii 4-aad .
Man City ayaa ku badneyd kubadda inkastoo Chelsea isku dayayeen in kubadda la qeybsadeen waxaana daqiiqadii 7-aad mar kale ku sigteen gool xaqiiq ah waxaana qasaariyay Aguero .
Balse guud ahaan Man City waxaa ka go`anaa in natiijada sii xoojistaan waxaana daqiiqaddii 13-aad ay heleen gool labaad oo gantaal ahaa waxaana banaanka ka toogtay Aguero .
Chelsea waxaa ku adkeyd in kubadda si sax ah ay isugu dhiibaan ayna gaarsiiyaan afka hore goosha Man City waxaana kaliya ka dhaq dhaqaayay Hazard balse Man City waxa ay u muuqdeen kuwo aan qasaarin doonin fursad waliba oo ay helaan .
Man City gool sedexaad ayay ka dhaliyeen Chelsea daqiiqaddii 19-aad ka dib qalad ka dhacay Ross Barkley waxaana saxiixay mar labaad Sergio Aguero , ka dib Chelsea waa ay bur bureen .
Man City oo kubadda haysatay ayaa mar waliba oo ay u dhawaadaan goosha Chelsea waxa ay ahaayeen kuwo halis ah halka kooxda ka dhisan galbeedka London ku adkeyd in kubadda u soo jiidaan afka hore waxaana mar kale lagu helay gool 4-aad daqiiqaddii 25-aad waxaana banaanka ka toogtay Ilkay Gundogan .
Qeybta nasiinada lagu aaday afartaas gool ee nadiifka ah .
Soo laabashadii , labada koox qaab degan ayay ciyaarta ku bilaabeen halka Man City daqiiqadii 50-aad gool madaxa ahaa ay kaga dhacday birta goosha Chelsea waxaana sidaas sameeyay Aguero
Naadiga Man City dhaqaaq wacan ayay wadeen waxa ayna baadi goobeen gool 5-aad oo traheem ayaa baxsada ahaa waxa ayna Chelsea daqiqiadii 52-ad soo giliyeen Mateo Kovacic
Ka dib goolkaas , waxa ay Chelsea mararka qaar isku dayayeen in u dhawaadaan shabaqa Man City balse qaab saxan ma aheyn , waxa ayna Man City daqiiqaddii 65-aad ay badaleen Aguero iyaga oo soo giliyay Gabriel Jesus , halka Riyad Mahrez ,a soo giliyay daqiiqadii 68-aad waxaan xilligaas loo saaray Kevin De Bruyne
Dhamaadkii Chelsea waxa ay isku dayayeen in ugu yaraan goolka calanka keenaan balse Man City oo ciyaareysay kubad kalsooni leh maadaama natiijada xaqiijiteen ayaa fashilineysay isku day waliba
Man City xasuuqeeda ma joogsan waxa ayna daqiqiiqaddii 80-aad dhaliyeen gool 6-aad oo si cajiib ah looga shaqeeyay waxaana ugu dambeyn shabaqa ku hubsaday Raheem Sterling .
Si waliba oo ay ahaato, waxaa Chelsea loogu dhameeyay nus darsin goolal ah , waxa ayna City haatan hogaanka horyaalka England ku hayaan goolal xili ay isku dhibco yihiin Liverpool
Juventus oo guul ka gaartay kooxda Sassuolo
AC Milan oo guul muhiim ah ka gaartay Cagliar